USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof mpamatsy sy mpanamboatra - orinasa China, Shenzhen TIZE Technology Co., ltd.
Tsy misy bark Collar
Ny bateria tsy namboarina amboaram-bokatra
Azo ampitarina tsy misy kitapo
Volavola fampiofanana alika lavitra
300m (1000ft) Vola lava fanamiana alika lavitra
600m (2000ft) Volon-tsolika lavitra
1000m (3300ft) Volon-tsolika lavitra
Rafitra fanoratana alika
Fehin-kitran'ny jiro mamirapiratra
Fahazavana mandeha amin'ny alikaola
Home > Products > Volavola fampiofanana alika lavitra > 600m (2000ft) Volon-tsolika lavitra > USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof
Rivargeable New Arrival Pet LED Dog Bark Collar
Elektronika biby kely alika manohitra fanoherana
USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof
600 meters azo amboarina sy kojakojan-jiro elektronika azo antoka vita amin'ny rano
Izahay dia manome USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof, isika dia mpanamboatra matihanina sy mpanondrana, natsangana tamin'ny Jan.2011, manana orinasa 2600 metatra toradroa sy mpiasa 120, manana ny fananana fampandrosoana sy fikarohana, nanolo-tena ho tonga orinasa avo lenta avo indrindra. mpamatsy biby. SGS & BV nitazom-bidy ny mpamatsy an'i Sina. Vahaingo ny fenitra iraisam-pirenena CE ROHS. Izahay dia afaka manome ny mpitiavana sy ny biby fiompiny amin'ny kalitao lafo vidy sy lafo vidy, izay manarona ny fiainany, ny asa sy ny fialam-boly. Manantena izahay fa lasa mpiara-miasa maharitra aminao any Chine ianao.
New Product USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof
1.Produksi fampidirana ny USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof
Ny Collar Dog Training Collar dia mampiasa sombin-tsolika noforonin'ny saina mba hamoronana ny fanaintainana tsy misy fanaintainana sy ny fandrisihana manafintohina hanakanana ny fanelingelenana tsy manaitra faniriana. Tsy misy fanaintainana mahatsiravina, mampiahiahy, ka aza manahy ny fahavoazan'ny alikao, azo antoka izany. Ny haben'ny ravin-kazo tsy azo ovaina, azonao atao ny manova ny haben'ny azy araka ny haben'ny alikao, tsy mila manahy momba ny tsy alika an'ny alika ianao.
2.Product Parameter (Famaritana) ny USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof
Product Volaromainty fiofanana lavitra
Salan-jotra lavitra 600 metatra (2000 tongotra)
Beep + Vibration + Shock
500mAh ho an'ny mpandefa ary 250mAh ho an'ny mpandray
Haavon'ny fahatokisan-tena 1-8 ambaratonga azo zahana noho ny fanamafisam-peo sy ny fahatairana
toetra Transmitter manana hidy / hidy bokotra
Transmitter dia nanasaraka ny bokotra Function
Accessories 1 * Transmitter, 1 * mpandray, 1 * TbU Belt, 1 * Charger, 1 * USB cable, 1 * Test Light, 2 Sets of Metal Probes, 1 * Mini Spanner, 1 * English Manual
3.Product Feature Sy fampiharana ny USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof
Ny fiofanana amin'ny alàlan'ny fihenan'ny alika lavitra amin'ny alàlan'ny RF433 MHZ Teknolojia ambony dia mitobaka hatramin'ny 600 metatra (2000feet), elanelam-panofanana azo; super anti-interference, transmitter tsara mifehy tsara ny voaly amin'ny valiny haingana. Ity kofehy fiofanana amin'ny alikaola ity dia natao indrindra haharitra ary ny mpampita sy ny vozona dia mora apetraka amin'ny tariby fiampangana, tafiditra ao anaty fonosana. Ambonin'izany, ny alikanao aza dia afaka milomano rehefa mitafy ilay Volon-dàlam-panofanana amin'ny Remote, satria feno rano tanteraka izy.
4.Product antsipirihany USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof
Lozan'ny fanatanjahan'ny alika lavitra ny rano dia mampiasa bateria azo avy amin'ny lithium avo be (500mAh ho an'ny mpandefa ary 250mAh ho an'ny mpandray).
Fomba 3: fanaintainana static, vovoka, bela.
1-8 ambaratonga azo haingam-pandeha noho ny fihenjanana static sy mangovitra.
Mifanaraka amin'ny alika rehetra amin'ny 15lbs ka hatramin'ny 110lbs, ny fehikibo TPU dia azo ahodina amin'ny 9.5 ka hatramin'ny 26 santimetatra.
Afatory haingana ilay mpindrana amin'ny mpandray crarons, ao anatin'ny 3 segondra.
5.Product Qualification of USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof
Manana taratasy fanamarinana mahazatra izahay, ao anatin'izany ny CE sy RoHS. Raha manana fanontaniana ianao dia andefaso mailaka izahay raha te hahazo ny tatitra momba ny fitsapana.
6.Delivery, Fandefasana ary Serhana USB Rechargeable Remote Dog Training Collar Waterproof
Drafitra fenitra: 7-10 andro eo ho eo aorian'ny nanamafisana ny fandoavam-bola.
Drafitra fadin-tseranana: tokony ho 10-15 andro aorian'ny fanamafisana ny fandoavam-bola.
Ho an'ny maika maika, azontsika atao haingana kokoa, alefaso azafady ny mailaka mba hiresaka.
1-2 andro fiasa taorian'ny nanamafisana ny fandoavana ireo santionany.
Alefaso azafady ny mailaka andefasana santionany.
F: Fampahalalana momba ny baiko
A: Famonosana: boaty miloko 1pc / loko na fonosana mahazatra
Alefaso azafady ny mailaka fanampiny amin'ny fonosana samihafa.
Q: Fotoana ohatra
A:1-2 andro fiasa taorian'ny nanamafisana ny fandoavana ireo santionany.
F: Ahoana ny fomba hibaikoana?
A: 1. Hankatoavina santionany.
2. Ny mpanjifa dia mandefa ny tahiry 50% aorian'ny nahazoana ny PI anay.
3. Ny mpanjifa dia mankasitraka ireo santionany ary mahazo ny tatitra momba ny fitiliana raha ilaina izany.
4. Handamina ny famokarana faobe.
5. Handamina fandefasana entana.
6. Ny mpamatsy dia mandamina antontan-taratasy ilaina amin'ny fanondranana sy fandefasana entana amin'ny mpanjifa.
7. Ny mpanjifa dia mandamina ny fandanjalanjana alohan'ny fandefasana.
8. Manolotra ny isa fanaraha-maso amin'ireo mpanjifa rehefa avy nandefa ny entana.
Hot Tags: USB Rechargeable Remote Training Collar Waterproof, Shina, Mpanamboatra, mpamatsy, Fokatra, Namboarina, Varotra, Mora, Vaovao, Fahafahana, Quotation, Vidiny, Pricelist
Colalr fiofanana momba ny mpivarotra Amazon ambonyLozom-bavam-bokatra lavitra an'ny alikaUSB Rachargeable USB RemarVolon-koditra fanatanjahantena alika ny ranoUSB Rachargeable Remote Dog CollarVolavola fiofanana alika azon-kitakelam-bokatraVola famolavolana alika fihenan-jaza vaovao600m Solika kodiarana lavitraVolon-tsolika lavitra alaina 2000ftUSB alika famatsiana alika USB
Famoronana Bark Collar Mini Vibration
Fametahana alikaola Pet Dog Electric Anti Bark Collar
Mandaitra ary olombelona avy amin'ny Anti Bark Collar
Elektronika biby kely alika biby fiompy biby fiompy
Elektronika Pet Big Dog Bark Collar
Moa ve ny volon-koditra mifehy ny volon-koditra no ataon'ny mpiambina ny alika?
Mifanaraka amin'ny alika rehetra ve ny TIZE Dog Anti Bark Collar?
Fikaon-dàlana fanatanjahantena alikaona farany indrindra
Moa ve ny fanesorana ny voan'ny alikanao rehefa ao anaty hevitra tsara izy?
Address: 3 / F, fananganana A1, Faritra Industrial TianKou, Xixiang, Distrikan'i Bao'an, Shenzhen
Copyright @ 2019 Shenzhen TIZE Technology Co., ltd. Zo rehetra voatokana.